Real Madrid Oo Iibineysa Lix Ciyaaryahan Si Ay U Hesho Erling Braut Haaland, Iyo Mbappe.
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo iibineysa lix ciyaaryahan si ay u hesho Erling Braut Haaland, iyo Mbappe.
March 28, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay go’aansatay inay iska iibiso lix ciyaaryahan xagaagan, si ay dhaqaale ugu hesho Erling Braut Haaland iyo Kylian Mbappe .
Xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa qandaraaskiisa Parc des Princes uu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, taasoo la micno ah in Los Blancos ay si xor ah kula soo wareegi karto Mbappe.
Dhanka kale, Real Madrid waxay awood u yeelan doontaa inay bixiao 65 milyan ginni ee lagu burburin karo qandaraaska Haaland xagaagan, waxayna kaliya ku qasbanaan doontaa inay ka hortagto tartan kooxaha kale.
Sida laga soo xigtay Fichajes , Carlo Ancelotti ayaa diyaar u ah inuu u ogolaado Luka Jovic , Mariano Diaz , Eden Hazard , Dani Ceballos , Marco Asensio iyo Jesus Vallejo inay ka tagaan Bernabeu si ay ugu ururiyaan lacag ku filan mushaharka Haaland iyo Mbappe.
Mbappe iyo Haaland labaduba waa gooldhaliyeyaasha ugu sarreeya, iyagoo hore u dhaliyay 158 gool 208 kulan oo uu u saftay PSG, halka xiddiga heerka caalami ee dalka Norway uu dhaliyay 80 gool 82 kulan oo uu u saftay kooxda Jarmalka.